Philippe Coutinho Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Philippe Coutinho Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'O Magico'.
Anyị Philippe Coutinho Storymụaka Akụkọ Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Brazil na Liverpool Legendary Footballer gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ enweghị uche na ihe nzuzu ọ na-eme maka egwuregwu ahụ na-eme ka ndụ Coutinho na mmalite dị ala bụrụ ihe mgbagwoju anya nye ndị fan. Ugbu a ka anyị bido;
Akụkọ Philippe Coutinho bụ nwata - Ndụ mbido:
Philippe Coutinho Correia mụrụ na 12th nke June, 1992 na Rio de Janeiro, Brazil site n'aka Ze Carlos Coutinho (nna) na Dona Esmeralda Coutinho (nne).
O tolitere n'ime ezinụlọ nke na-arụ ọrụ ego dị ala yana na-ebi ndụ dị ala. Ọ bụ onye ihere dị ka nwata. Ọ ga-ahọrọ ịnọ naanị ya na-ebe ákwá ụbọchị niile mgbe a kpaliri ya ime ihe ọ na-agababughị na mbụ.
Njem njem ya rue ịdị ukwuu malitere n'obodo ndị dị na Rocha, na Rio de Janeiro. N'ezie, ụlọ ya dị nso na ama egwuregwu Maracanã mara mma nke e wuru na mpaghara ndị dị na Rio.
Arthur Melo Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Egwuregwu ahụ nwere mmasị na ya dịka nwatakịrị ma ọ sonyeghị. Ọ nwere ike na-ele ndị mmadụ ka ha na-egwu bọọlụ na nso ụlọ ya.
Ọ bụ n'otu ụzọ a na-ahụ ya ka ọ na-ele ụmụnne ya ndị nwoke abụọ okenye Cristiano na Leandro aka ndị enyi ha. Ọ bụ nke a pitch ọ na-conjured ya anwansi.
Coutinho nwere mmasị n'ebe ụmụaka ndị ọzọ nọ, ọbụnadị ụmụnne ya ndị okenye na nkà ha mgbe ha na-ekiri ha gosipụtara talent ha.
Dị ka ya si kwuo, "Ha na-agba bọọlụ mgbe niile dị ka ọtụtụ ụmụaka nọ na mba ahụ, n'ezie, achọrọ m ịdị ka ha,"
Coutinho na-ekwu. Maghị ihe ọ bụla. Coutinho amaghi na o ga adi nma. Ọ maghị na ọ ga - adị mma karịa onye ọ bụla bịara igwu egwu na ọkwa ahụ.
N'ezie, site na mgbe ọ dị afọ isii, okwute nke obere okwute dị na pitch ghọrọ ebe obibi ya. Igwe ahụ dị larịị ghọrọ ebe egwuregwu ya.
Philippe Coutinho Biography - Otu o si banye na Football:
Mgbe ọ dị afọ isii, nkà nke Coutinho ghọrọ ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị na-ekwenyeghị na nwata ihere nwere ike ịdị mma ka ọ dị.
N'oge ụfọdụ, ezinụlọ ya zuru oke ga-ahapụ ụlọ naanị iji gbaa akaebe na nka ya. Ọ bụ nne nne nke enyi gbara nna ya, Jose Carlos ume, ka ọ debanye aha nwa ya nwoke ngwa ngwa na mpaghara ọ bụla dị nso karịa ịhụ ka egbughị oke ọrụ.
Enweghị obi abụọ site na nna Coutinho, nwata ahụ nwere onyinye sonyeere otu ụmụ nwoke nọ na mpaghara bụ ndị lekwasịrị anya n'egwuregwu ụmụaka.
N'oge a, ihere anaghị eme ya na ndị enyi ya ịgba bọọlụ n'ihi na ọ matala ha kemgbe ha bụ ụmụaka. Coutinho nwere ọtụtụ ihe karịa ụzọ abụọ ya na asọmpi ụmụaka. Ọ maghị na ndị ọkachamara hụrụ ya ọkachamara.
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ndị nkụzi Vasco gakwuuru onye na-ese ụkpụrụ ụlọ na asọmpi Coutinho rụrụ nke ọma ma gbaa ya ume ka Coutinho soro ụlọ ọrụ ya gaa otu ikpe.
"Anọ m na-ebe ákwá, achọghịkwa m igwu egwu n'ihi na m bụ onye ihere," Coutinho chetara. Ọ ka gosipụtara omume ihere ya ma na-atụ ụjọ na ọ ga-atụ ụjọ.
Mgbe mbụ ọ gụsịrị agụmakwụkwọ, Ọ jidere nna ya na oche mgbe ọ na-ekiri ụmụaka ndị ọzọ na-ekpo ọkụ.
Adị m ọhụụ na otu ahụ, onye ọ bụla ma ibe ya nke mere na enwere m ntakịrị ihere na ahụ erughị ala. O kwuru.
“Mgbe obere oge na ụfọdụ mkpali, m dị mma. Mgbe m malitere igwu egwu, ọ bụ ihe nkịtị na ihe okike. Adịghịzi m eme ihere, ọ na-atọ m ụtọ. ”
Ọ bụ mgbe ọ dị afọ 13 ka ọ bịara mara na Coutinho nwere ike ibi ndụ site na football. Ka ọ na-etinye ya;
“Ihe mbụ m chere n’obi m bụ,‘ Ọ dị mma, ị ga-abụrịrị ọkachamara ’nke a bụ mgbe akpọrọ m ka m banye n’òtù ndị Brazil n’okpuru afọ 14,” ekpughe Coutinho.
“A họpụtara m n’ime ọtụtụ ndị nwere ezigbo egwuregwu, yabụ ọ bụ ụzọ isi gosi m na nke a nwere ike ịbụ ọrụ - na m nwere ike ịme ya, na m maara ya nke ọma.
N'oge ahụ, achọpụtara m na m kwesịrị ịmalite ichesi echiche ike banyere egwuregwu ahụ. ”
Ndị mụrụ ya, ụmụnne ya ndị okenye na Aine (nwunye ya) ga-eso ya ebe niile, na-ele egwuregwu ọ bụla. Nkwado ha kpaliri ikike Coutinho.
Mgbe ọ dị afọ 16, nnukwu ọhụụ ya rutere. Ndị dike Italiantali bụ Inter Milan kwụrụ $ 7.7 nde iji nweta ọrụ nke onye dị afọ iri na ụma, bụ onye ga-anọgide na-etolite na Vasco ma sonyere ha afọ abụọ mgbe e mesịrị.
Philippe Coutinho aha otutu:
Dị ka nwata, Coutinho nakweere aha aha 'Nta Anwansi' site na ndi ozo ndi nwere obi uto igwa ya dika onye ntà onye ogbu-okpa ndi mmuo n’obodo ya.
Nke a bụ aha otutu o debere rue oge. Aha otutu nke mere ya ngwa ngwa. Ike uto football ya di elu.
N'ezie, ọ dịghị anya tupu Coutinho ghọrọ otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu mbụ nke Brazil mgbe ọ ka dị obere.
O nwere ike igwu egwu na azụ, n'azụ onye na-eti ihe ma ọ bụ dịka onye naanị ya. Ọmara ya, ikike ịgafe na flair maka bọọlụ mere ka ọ dị iche na ndị ọzọ na-agba ụkwụ.
Dị ka Coutinho si kwuo, Beingbụ onye pụrụ iche adịghị mfe. O siri ezigbo ike ịhapụ ndị ọzọ mgbe ọtụtụ nde mmadụ na-anwa ime otu ihe ahụ.
Ọ bụ mmetụta dị n'etiti ụmụ nwoke na Brazil n'ihi na football dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ” ọ kọwara. “Have ga-enye ihe niile n'ihi na e nwere adịghị agwụ agwụ ọkọnọ nke talent na factory mgbe niile.
Ọ bụ mgbe niile n’azụ uche gị ka enwere ọtụtụ nde ụmụaka na-anwa ime otu ihe ahụ.
Mana ihe m ma bụ na ọbụghị naanị nka ma ọ bụ nka ahụ ka ị ga - enwe ike gbasiri ike ma kpebisie ike ime ya.
Imirikiti ndị na-eto eto m tolitere na-egwu egwu enweghị ọrụ na egwuregwu ugbu a. Oge ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ọ dị mfe ịbụ ndị ọgba bọọlụ. Maka m, ọ bụ ọrụ siri ike nke na-anaghị akwụsị akwụsị. ”
Ndụ Philippe Coutinho:
Philippe Coutinho si na klas nke obere na-enwe nsogbu na ezinụlọ nwere obi ụtọ Brazil bụ ndị biri na ọnọdụ nsogbu akụ na ụba.
Ọ bụ ezie na ha abụghị ndị ogbenye, mana ezinụlọ ya nwere ohere akụ na ụba ole na ole maka nwa nwoke ikpeazụ ha mụrụ. Otu nsogbu dị ukwuu bụ obere ego nke na-eme ka ọ daa ogbenye n'oge ụfọdụ.
Ọ bụ football nke nyeere ha aka imeziwanye ọnọdụ ndụ ha n'ihi nwa ikpeazụ nwa ha bụ 'Coutinho'. Ọ maara nke ọma na Brazil wetara ọtụtụ ego nke nyeere aka ịchebe ezinụlọ ya.
Otu o si zọpụta ezinụlọ ya na ịda ogbenye:
N'ezie, ozugbo Coutinho malitere ịkpata ego, enweghịzi nri na enweghị akụ na ụba n'ụlọ ya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nna ya, Mr Ze Carlos Coutinho (n'akụkụ aka ekpe nke foto dị n'elu) bụ onye na-akwado Barcelona. Ọ bụ naanị ihe mere nwa ya nwoke ji jụ ndị isi Spanish n'agbanyeghị Neymar na-agbasi mbọ ike ka o mee ka Midfield banye Barcelona.
Dona Esmeralda Coutinho bụ nne Philippe Coutinho. Ọganihu ndị Brazil gosipụtarala otu Liverpool si 2016/2017 na-agbanye aka site n'ike mmụọ nsọ site na mama ya.
Coutinho na-ekwu njikwa Brendan Rodgers kụrụ aka na mkpali na-enweghị atụ nke ịgụ akwụkwọ ozi sitere na mums ka a na-ebo ya ebubo n'akụkụ Barclays Premier League n'oge ahụ.
Liverpool mechara daa dị mkpụmkpụ, na-efu ya na Manchester City site na isi abụọ, mana Coutinho ekwuola maka otu ozi ndị a siri nwee mmetụta dị ukwuu na ime ụlọ mgbakwasa ahụ.
A gụpụtara ozi sitere n'aka nne nke Coutinho tupu Liverpool ebibie Manchester City na Anfield na Eprel 2017. Ọ bụ egwuregwu nke onye Brazil n'onwe ya gara n'ihu iji merie onye mmeri.
Onye 22 afọ ahụ gwara CNN Sport: "M na-echegbu onwe m ka ọ bụrụ oge m, ka onye njikwa ahụ gụọ akwụkwọ ozi ahụ site na mama m.
'Echere m ma chere ya. Onye njikwa ahụ gwara ndị nne nke onye ọkpụkpọ ọ bụla nọ na otu ahụ, ọ na-agụ ozi tupu egwuregwu ọ bụla ruo ọtụtụ ọnwa na n'ikpeazụ, oge m abịa.
Na mbụ, amaghị m na onye njikwa ahụ ga-agụ akwụkwọ ozi ya, mgbe ahụ ọ kpọtụrụ aha ya ma enwere m nsogbu. O kwuru na ọ hụrụ m n'anya, na-anya m, na-anọnyere m mgbe niile ma na-atụ uche m. "
NDỊ BỤ: Coutinho nwere ụmụnne nwoke toro eto abụọ aha Leandro Coutinho na Christain Coutinho. Mụnna nwoke ndị okenye na-agba bọọlụ site na nwata.
N'adịghị ka nwanne ha nwoke, ha apụghị n'etiti ìgwè mmadụ ahụ. Ha gbanwere uche ha na egwuregwu ahụ ma mesịa bụrụ ndị ọka iwu ọkachamara.
Philippe Coutinho Nwunye - Aine:
Otu n'ime ihe kpatara na aha Coutinho adịghị plasta n'ofe isi maka itinye aka na ihe ọ bụla na-emeghị eme bụ n'ihi na ezinụlọ ya kegidere ya na nwunye, ogologo oge gara aga. Nke a bụ Philippe Coutinho Love Story.
Coutinho na Aine bụ obi obi nwata ha ghọrọ ndị mmekọ ndụ na ezigbo ndị enyi ibe ha.
Aine bụ nanị 17 mgbe ọ hapụrụ ihe niile ọ maara n'azụ (gụnyere ezinụlọ ya) iji soro Coutinho gaa kọntinent ọhụrụ ebe o biri ndụ ọhụrụ.
Mgbe ọ dị afọ iri abụọ, onye bụbu onye na-akpọ Inter Milan na-akpọ nwunye ya Aine ma ha ka na-enwe obi ụtọ n'alụmdi na nwunye dị ka n'oge ederede.
Aine bụ Coutinho's axis; oku mbu ya mgbe ihe mebiri ma obu di nma. N'ụbọchị egwuregwu, ọ bụ olu ya na-agba ume ma na-akpali ya. Kwa ụbọchị, ọ bụ ya nkasi obi na ụzọ mgbapụ.
"Aine na-ekere òkè dị ukwuu n'ihe niile m na-eme," Coutinho na-ekwu. “Anyị anaghị amụkọ ihe ọnụ, anyị na-ahụ ibe anyị na nnọkọ oriri. Enwere m ihere ma jụọ m ma m nwere ike ịbụ enyi ya nwoke. Nke a ka m nabatara ”.
Ọ gara n'ihu…“Ọ dịghị oge ọ bụla dị ka, 'ọ dị mma na anyị nọ ugbu a.'
“Anyị si n’otu agbataobi na mgbe anyị mechara nnọkọ oriri na ọ partyụ partyụ ahụ, anyị malitere ịhụ onwe anyị karịa, na-agakọ ebe. Nke a bụ mgbe ịhụnanya anyị mere ka anyị mikwuo emi. ”
Aine na-aga egwuregwu egwuregwu ọ bụla, yana ọtụtụ ụbọchị ọ bụla enwere ike. Mgbe ọ na-akara, akụkụ nke ememe ya bụ ịkwanyere ya ùgwù mgbe niile.
Ọ na-enwe obi ụtọ ịfụ nsusu ọnụ na ntụziaka ya. Ọ bụ akara nke ekele ya maka ihe niile ọ chụrụ n'àjà na nkwado na-adịghị ada ada ọ na-enye.
Ọ bụ ịhụnanya sitere na Aine nke mere ka ụjọ ghara ịtụ Coutinho. Ginghapụ ya bụ ajụjụ dị mkpa. Deeplybụ miri emi hụrụ n'anya site na ya na-enye ya ume na obi ike.
Nke a ka ọ na-aga n'ubi egwuregwu. N'ezie, ụmụ nnụnụ abụọ a hụrụ n'anya na-enwekọ oge mwute na oge obi ụtọ ọnụ.
Coutinho gosipụtarala nwa nwa nwunye ya maka ndị hụrụ ya. Foto dị n'okpuru ebe a na-egosi onye ọkpụkpọ egwuregwu Brazil na onye òtù ọlụlụ ya na-enwe obi ụtọ ka ha na-eche ọmụmụ nke nwa mbụ ha.
Iji mee ememme ezinụlọ ha n'ọdịnihu, Aine Coutinho nwere '70% ntinye mmanya 'adọtara na afọ ya.
Moreso, ha abụọ emeela ọmụmụ ọmụmụ nwa mbụ ha.
Onye na-egwu egwuregwu Brazil bụ Coutinho pụtara na ọ nọ n'ọnọdụ dị mma mgbe egwuregwu ụfọdụ gasịrị, ebe ọ na-ese foto ya na nwunye ya bụ Aine na obere nwa iji mee ememme Motherbọchị Ndị Nne na UK.
Coutinho kesara foto dị n'okpuru na akaụntụ Instagram nke onwe ya ma dee, sị: "Nne Nne Na-enwe Obi Ụtọ ụbọchị m hụrụ n'anya."
Forhụnanya maka Futsal:
Coutinho nwere oge ụfọdụ na-ahụ 'Futsal' - ụdị egwuregwu a na-egwu n'obere obere, ya na obere ìgwè na bọl dị arọ.
Footballgba bọọlụ Futsal mgbe ọ dị obere mere ka Coutinho nwee ọmarịcha njikwa bọọlụ a maara ya maka. LEE YA N’okpuru;
Felipe Anderson nwa akụkọ akụkọ nke na-agbaghaghị eziokwu
Dika nwatakiri, obere osisi ya nyere ya ebe di ike nke ike ndọda, na-eme ka ọ nwekwuo nimble, na-emegharị ma na-arụ ọrụ nke ọma na bọl.
Dị ka ọ na-eme na ọtụtụ ndị Brazil, ọ tolitewo anwansi pụrụ iche n'ụkwụ ya site na afọ 6. Ewezuga anwansi nke nwetara, o nwekwara ọrụ ọrụ dị ịtụnanya.
Philippe Coutinho Biography - Ndụ na Europe:
Ọchịchọ nke itinye ngbanwe ahụ ahụwo mmeri 22 afọ na ọnọdụ ebe ndị ọzọ nwere ike ịda mbà.
Ebe ọ na-aga Ịtali, "Nrọ maka nwatakiri ọ bụla n'ihi na mgbe anyị na-etolite, anyị na-ele arụsị anyị niile egwu na Europe na nke ahụ bụ ebe anyị chọrọ ịbụ".
Nke a ghọrọ eziokwu. Enwere mmerụ ahụ na oge ụfọdụ oge ịgba ọsọ 90 nkeji dị ka echiche nke echiche ya.
"Ihe niile m gabigara n'Italytali nyeere m aka ịkpụzi,"Coutinho siri ike. “Enwere m mmerụ ahụ ụfọdụ, obere oge egwuregwu na ihe anaghị aga m kama nke a bụ oge dị m ezigbo mkpa.
Ọ bụ oge kachasị sie ike nke ọrụ m n'ihi na ọ bụ oge mbụ m na-apụ n'ụlọ, m wee malite igosi onwe m site na ncha.
Ka ọ na-erule afọ 20, onye na-awakpo ahụ ejidela na mba anọ dị iche iche na mpaghara ụwa abụọ, na-enwe ọdịiche nke ọdịbendị na omenala.
"N'ihi ihe isi ike ndị dị n'Italytali, ọ bịara dịrị m mfe ịkwado na Spain n'oge ego m na-agbazinye ego nke Espanyol," ọ na-akọwa.
“Na England, ọsọ na anụ ahụ bụ ihe ndị kachasị enyere gị aka ịnagide. Anọ m na-eche echiche ngwa ngwa, mana na Premier League, ị ga-emeghachi ngwa ngwa.
“Enweghị oge, ọ nweghịkwa ohere ka e nyere unu. Ana m agbalị ịmụta ihe ọ bụla n'ebe ọ bụla, n'ọnọdụ ọ bụla yabụ na enweghị ajụjụ ọ bụla na ahụmịhe ndị a dị iche iche enyeworo aka mee ka m bụrụ onye ọkpụkpọ m. ”
Oge dị na Inter bụzi ebe nchekwa dị anya maka Coutinho.
Fromhụnanya si Liverpool Fans:
"O siri ike ịkọwa ihe nke ahụ pụtara m," ọ na-ekwu. “Ọ bụ mmetụta pụrụ iche pụrụ iche. Ọ dị ịtụnanya mgbe m nụrụ ka ndị egwu na-abụ aha m.
Na mbido, o juru m anya ịhụ ka ha si jikọọ m na Anfield. Enwere m goosebumps oge mbụ m hụrụ ọkọlọtọ na ihu m na ya n'ihi na anaghị m atụ anya ya.
Ọ bụ ihe ijuanya dị mma, achọrọ m ịkele ndị Fans maka mbọ ha dere ọbụna ide 'O Mágico' [The Magician] n'asụsụ Portuguese. ”
Afọ a 2017 gụrụ ya dị ka afọ ise kemgbe Coutinho hapụrụ ala nna ya, Brazil. Ihu igwe na Liverpool na-enye afọ ojuju maka ya. Nye ọtụtụ, ọ chọtara ebe ọzọ ọ bụ.
Ọnụnọ Social Media:
Coutinho nwere oke onodu na ntanetị na mgbasa ozi. Nwoke mbu nke Vasco da Gama nwere ebe nrụọrụ weebụ ya.
Ọ nwekwara karịa ndị na-eso ụzọ 150,000 nke akaụntụ Twitter ya, profaịlụ YouTube n'otu n'otu na nde mmadụ 4.6 na Instagram.
Ezigbo Enyi na Neymar:
mgbe Roberto Firmino Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ezigbo onye agbata obi nke Coutinho. Nyere na ụzọ ahụ jikọtara ọnụ dị ka ụmụaka, a kwenyere na nnukwu mmụọ nsọ Philippe n'oge ọ bụ nwata bụ onye mbụ, Neymar.
Na a na-adịbeghị anya N'ajụjụ ọnụ FourFourTwo, Liverpool na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-atụ aro na ọ dabeere na ya egwuregwu gburugburu Neymar,
"Ọ bụ arụsị anyị kachasị na Brazil football na onye na-eto eto na-ele anya." N'ịga n'ihu, Coutinho kwuru, sị,
"Ọ bụ ezigbo enyi m na ọ dị oke mma inwe otu ndị otu ọgbọ dịka mụ onwe m na-enwe mmasị".
Site na ndị enyi nwata dị ka e sere n'okpuru, ndị ọzọ abụọ etoola na ndị toro eto ma ka na-enwe ọbụbụenyi dị otú ahụ.
Philippe Coutinho Bio - Chemistry na Roberto Firmino:
Ọ bụ ezie na onwu na otu niile dị mkpa, ndị na - agba bọọlụ ga - enwe ụfọdụ ndị ha na - emekọrịta ihe karịa ndị ọzọ.
Na nke Phillipe Coutinho, ọ bụ Roberto Firmino onye o kwuru dị ka nke ya 'ezi enyi' na osisi.
"Anyị nwere ezi nghọta," Coutinho na-akọwa, "Enwere m obi ụtọ na mụ na Roberto na-egwu egwu ma anyị bụ ezi ndị enyi. Anyị abụọ na-asụ Portuguese. Anyị abụọ, gụnyere Lucas na Alberto (Moreno), na-anọkọ oge na-agba bọl. "
Philippe Coutinho Okpukpe:
Ndị na-agba bọọlụ niile na-esite n'ike mmụọ nsọ wee nweta mmụọ nsọ; ihe na-ahụ maka ahụ ike, arụsị ịgba bọọlụ mbụ ma ọ bụ, na nke Coutinho, okpukpe.
N'agbanyeghị na ọ laghachiri na ọchịchọ ya ịghara inwe akara, onye midfielder na-ekwu na ọ bụ "Ọ bụghị onye na-elekọta ụlọ ịgba egwu" adịghị a doesn'tụ mmanya na-aba n'anya na karịa ihe niile, hụrụ Jizọs n'anya.
Coutinho kwuru na oge ịbanye maka Reds, “Anaghị m a alcoholụ mmanya na-aba n'anya… M na-achụso obi ụtọ site n'ụzọ ndị ọzọ. Anyi ga ekwu maka otu o si di uku inwe Chukwu n'ime anyi? ”.
Ma gị onwe gị bụ onye okpukpe ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ịhụ ndị nrịba ama na-enwe afọ ojuju na ndụ ụtọ dị mfe nke ndụ. Jurgen Klopp n'ezie agaghi echegbu onwe gi banyere ihe ndi ozo na-eme na Brazil.
M HERE COUTINHO, NA NICK #THE_LITTLE_MAGICIAN